Ihe mere m ji arụ ọrụ n'efu na Wil Wheaton nwere ike ịbụ ezighi ezi | Martech Zone
Edemede a abụghị arụmụka, anaghị m achọ ịmalite esemokwu na Wil Wheaton na post ya, ị gaghị akwụ ụgwọ ụlọ gị site na ikpo okwu pụrụ iche wee ruo na saịtị anyị na-enye. Wil Wheaton bụ akara ama ama ama ama ama ama ama nwere ọtụtụ. Ọ rụsiri ọrụ ike iji zụlite ndị na-ege ya ntị na obodo ya - yabụ mkpu na nkwekọrịta ya.
Wil Wheaton ji nkwanye ùgwù na nzaghachi ya. Ọ bụkwa amamiihe ime ya n'ihu ọha… na-ewere ọjọ, ikeketeorie na-erigbu ndị mmadụ ụbọchị ndị a niile bụ ọnụma. Mana ọtụtụ n’ime anyị abụghị Wil Wheaton. Ọtụtụ n’ime anyị na-anwa ime ka ndị mmadụ na-ege anyị ntị na ndị na-ege anyị ntị ma dị njikere itinye ego na ime nke ahụ. Ohere iji rute ndị na-ege ntị dị ka HuffPo bụ, n'ezie, ego. Kama ịkwụ ụgwọ maka mgbasa ozi, ego ọ ga-abụ iji nye gị ụfọdụ ikike gị.
Ka anyị buru ụzọ tụlee nnukwute anụ ọhịa ahụ, onye isi ike a na-akpọ Huffington Post. Martech Zone na-aga n'ihu na-enwe okpukpu abụọ ọnụọgụ kwa afọ. Mgbe afọ iri gachara n'ịntanetị, blog ahụ na-aga n'ihu na-adọta ndị ahịa dị ukwuu na ụlọ ọrụ anyị, DK New Media. Direct revenue ibu dị mma, ma Jenn (m azụmahịa ibe) na m maara na anyị ga-anọgide na-etinye ego na blog na-enye a revenue iyi nke pụrụ iduga profitability maka mbipụta.
Mgbe mbipụta ahụ ruru nnukwu uru (na-ewepu ọrụ ụlọ ọrụ), ndị mmadụ nwere ike ịzaghachi otu ụzọ ahụ maka anyị banyere ndị edemede ọbịa na ọdịnaya etinyere. Anyị na-ebipụta ọtụtụ post kwa izu site na ndị ọbịa mgbe anyị kwenyere na ndị na-ege anyị ntị ga-erite uru na ọdịnaya ahụ. Anyị anaghị akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu.
Anyị anaghị akwụ ndị ọbịa ọbịa ụgwọ (mana) n'ihi na anyị etinyela ihe karịrị afọ iri iji mee ka ndị na-ege anyị ntị. Ana m etinye ego ma ọ dịkarịa ala otu ụzọ n'ụzọ anọ m kwa izu na-agụ ọdụ, na-ekwurịta okwu na ụlọ ọrụ, na-enyocha nyiwe, na-eme pọdkastị, na-agbakwunye usoro vidiyo anyị, na-agụ akwụkwọ, na-aga ihe omume ma na-akwụ ụgwọ maka nyiwe ndị na-akwado mbipụta anyị. Afraidjọ atụla m iche ihe oge ahụ bara uru… M ji ya kpọrọ ihe na nde kwuru nde. Enweghị m ike ịkwụ ụgwọ ụlọ m na ego ahụ, ma!
Ndi Wil Wheaton nwere ike ịkwụ ụgwọ ụlọ ya na post ya banyere Huffington Post? Ekwetaghị m ya.
Ndị na-ege anyị ntị bara uru. Anyị akwụla ụgwọ maka iru nke a n'ọtụtụ puku awa na ọtụtụ puku dollar na ntinye ego na nkwalite. Kwụ ụgwọ ndị ọbịa anyị na-abịa na ohere iji wulite ikike ha na ndị na-ege anyị ntị ma dọta ha isoro ha maka ebumnuche azụmahịa. Ndị ụlọ ọrụ ndị etinyeworo ego na ide ederede ọdịnaya dị ukwuu na anyị achọpụtala anọ revenue si ndị posts. Yabụ, ebe akwụbeghị m ụgwọ maka ọdịnaya ahụ, ndị na-ege anyị ntị akwụala
Maka ndị anyị na-abụghị ndị ama ama ma na-agbasi mbọ ike ka ha bulie ikike anyị na ịntanetị, ohere ịbịaru ma dọta ndị na-ege ntị onye ọzọ na-aga n'ihu itinye ego na ya bụ ohere magburu onwe ya. Ekwetaghị m na ọ bụ nrigbu ma ọlị… ọ bụ a bara uru uru ohere ebe uru nwere ike negotiated.
Nke bụ eziokwu bụ na onye ọkachamara PR nke ruru Wil Wheaton akwụ ụgwọ. Ya mere, HuffPo na emefu ego iji choo ndi amara dika ya. Ekwenyere m na Mazị Wheaton nwere ike nwee ike ịmekọrịta nkwekọrịta ebe ọ ga-erite uru - ma na-enweghị isi. Lee ụzọ ole na ole:
Nkwalite akwukwo - Maazị Wheaton bụ ode akwụkwọ maara nke ọma. Ikekwe ọ gaara enwe mkparịta ụka ịkwalite akwụkwọ ya n'efu na nnukwu ndị na-ege ntị na Huffington Post. Enwere ike ime ya site na ịkpọ oku iji rụọ ọrụ na ụfọdụ edemede ma ọ bụ isiokwu, ma ọ bụ ọbụna rịọ ka Huffington Post nyochaa akwụkwọ ndị ahụ na azụmaahịa. Nke ahụ nwere ike ibute ire akwụkwọ ole na ole!
Kpọọ-na-Action - Maazị Wheaton nwere ike nwee ike ịkwado ọkpụkpọ oku ka ọ rụọ ọrụ n'ime akwụkwọ ndụ Huffington Post ya nke gbara ndị mmadụ ume ka ha tinye Maazị Wheaton akwụkwọ maka ohere ikwu okwu. Ikwu okwu bu uzo bara uba nye ndi nwere onodu dika Mr. Wheaton.
HuffPo Ihe - Yana HuffPost Live, Huffington Post na-akwalite ma na-akwado otutu ihe omume mpaghara na nke mba. Ikekwe Maazị Wheaton nwere ike ịmekọrịta ikike ịbụ onye ọnụ na-ekwuru onye ama ama na mmemme ndị ahụ - ọbụnakwa nwee akwụkwọ ịbanye na nke ọ bụla.
Isi okwu bụ na m kwenyere na Maazị Wheaton nwere ike ịdị mfe nrigbu otu nzukọ dị ka HuffPo iji mee ka ọtụtụ ndị na-ege ntị, ndị na-ege ntị, na - n'ikpeazụ - ego nye ya. Na na revenue na-akwụ ụgwọ ụlọ!
Ihe Mere M Ji Arụ Ọrụ n'efu
Edere m free ọdịnaya na saịtị m, edere m free ọdịnaya maka saịtị ndị ọzọ ebe m chọrọ itinye aka na ndị na-ege ha ntị, ana m ekwu maka ya free na ihe omume ndi nwere olile anya m choro itinye aka na. N'ezie m na-edekwa ugwo ọdịnaya maka ndị ahịa anyị na abụ m ugwo ikwu okwu na mmemme ndị ọzọ. Oge ụfọdụ, ọbụnadị anyị na-akwụ ụgwọ ụzọ anyị ga-esi mee ihe omume nke mba anyị naanị iji kpuchie ya na mbipụta anyị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, m na-akwụ ụgwọ oge ụfọdụ iji ruo ndị na-ege ntị na mmemme ndị ahụ!
A na-enyocha ohere ọ bụla dabere na otu anyị nwere ike isi rite uru site na ikpughe na ndị anyị nwere ike ịkpakọrịta na ebe ahụ. Nke anyi rụọ ọrụ n'efu atụmatụ abarala anyị uru nke ukwuu. Ihe otu ihe omume mebiri iji nweta nkwekọrịta anyị agaraghị enweta mba ọzọ. Dị ahụ dugara n'ụdị ndị ọzọ. Na na na na.
Yabụ, enwere ike ịkwụ ụgwọ narị dollar ole na ole maka post post. Ma ọ bụ, enwere m ike imechi ụfọdụ azụmahịa na ndị na-ege ntị ma nweta ọtụtụ iri puku ma ọ bụ ọbụna narị puku kwuru narị dọla na nkwekọrịta. Ugbu a ị maara ihe mere m ji arụ ọrụ free.
N'ezie, ọ bụghị naanị na m na-arụ ọrụ n'efu - Ana m akwụkarị ụgwọ iji rụọ ọrụ n'efu! Na mmekorita ya na Dittoe PR, anyị etinyego ego nke ukwuu na ịchọta ndị mmadụ ezubere iche, ndị dị mkpa anyị chọrọ iru. Otu ndị nwere nkà na Dittoe PR ihe tinye onyinye m nye akwụkwọ ndị ahụ iji nye ohere ndị a. Anyị na-aga n'ihu na-enweta uru nke mmekọrịta ahụ - na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na ndị ahụ na-ege ntị anyị agaraghị ezute ma ọ bụghị.
Ị nwere mgbe nyere ndị mmadụ aka n’akwụghị ụgwọ ọnwa? Have nwetụla mgbe ị tụtụsịrị ihe mkpofu tụba n’ebe a na-ekpofu ahịhịa? You nwetụla mgbe ị nyere onye na-enweghị ebe obibi ego maka nri? Gịnị mere ị ga-eji mee nke ahụ? Anyị na-akwụ ndị ọrụ gọọmentị nnukwu ego iji dowe okporo ámá anyị ọcha na iji nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Anyị ka na-eme ya n'agbanyeghị na ọ bụ ọmịiko.
Achọghị m ibi n’ụwa ebe ndị mmadụ anaghị eme ihe ọ bụla belụsọ ma a kwụghachi ha ụgwọ. Dịka onye nwe azụmaahịa, enwere m ike ijide gị na m ga-apụ ahịa ma ọ bụrụ na ọ bụ omume m mere. Enwere m ọtụtụ ndị ọyị m nwere nkè na-ahụghị ụzọ dị otu a, mgbe ahụ anụrụ m nkụda mmụọ ha na azụmaahịa ha anaghị eto. Ekwenyere m na-enyere ndị mmadụ aka mbụ abụrụla ụzọ kasịnụ m si azụ ahịa m. Ma oburu na m nyere mmadu aka n'efu, ha na-atughari ahia m nye ndi ahia di uku.
Anaghị m ajụ ụkpụrụ omume Maazị Wheaton, mana ana m ajụ echiche bụ na ụlọ ọrụ na-erite uru na-erigbu mmadụ site na ịjụ ha ka ha nye onyinye ha na ahia. Maazị Wheaton ọ na-erigbu eziokwu ahụ Huffington Post nwere ego n'agbanyeghị nnukwu ihe egwu na itinye ego ha rụgoro iji wuo obodo ha? Ha akwụwo ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ maka mmezi na nkwalite nke mbipụta ha - gịnị kpatara ejiri eleghara nke ahụ anya?
Ana m agụ Ibe dịpụrụ adịpụ ugbu a Jeff Jeffson na ihe atụ ya bụ nke onye ọrụ ugbo. Ghaa ya n’akuku, gbue ya, ma rite uru di na ya. Onye ọrụ ugbo anaghị akwụ ụgwọ ịgha mkpụrụ ahụ, naanị a na-akwụ ya ụgwọ mgbe mkpụrụ a na-akọ nke ọma ma na-arụpụta mkpụrụ nke ọrụ ya. M ga-agba onye ọ bụla ume ịkụ mkpụrụ ebe ọ bụla ọ bara uru… ị ga-ewe nnukwu ihe ọkụkụ ozugbo ị mere!
Sonyere anyị na Blab
Mụ na Kevin Mullett ga-ekwu okwu banyere isiokwu a na Thursday Blab na Ngwongwo onu ahia anyi na abia! Enwere m olileanya na ị nwere ike isonyere anyị.
Tags: post huffingtonakwụ ụgwọ ọdịnayaọdịnaya a na-akwụghị ụgwọwil wuo
Nwachukwu Frank (@onyinyechi)
Nov 2, 2015 na 9:26 PM
Kwetara. Ọ dị n'aka onye edemede ahụ ikpebi ma ha chere na ikpughe ha ga-akwụghachi ha oge na mgbalị ha. Ọ bụghị otu ihe ahụ ka a gwara ndị na-eto eto na-edeghị akwụkwọ ka ha dee maka n'efu (ma ọ bụ na 6 cents / okwu, darn dị ya nso) na-enwetaghị otuto onye edemede. (Na m na-akwado na ndị edemede ahụ anaghị akwụ ụgwọ!)
N'ikpeazụ enwere ọnụọgụ bara uru na ebe akara ahụ ga-agbanwe oge na site na mbipụta. Ọbụna mgbe m rụrụ ọrụ dịka onye edemede na-edeghị akwụkwọ, achọpụtara m na enwere ndị isi ụlọ ọrụ: ka ọrụ na-agwụ ike ma ọ bụ ka a mata ya, ọ ga-akwụkwu ụgwọ ahụ. Yabụ ide akwụkwọ ntuziaka nwere ike ịkwụ ụgwọ nke ọma. Fde akụkọ ifo na-akwụkarị ụgwọ ọ bụla mana ọ ka nwere ike ịmụrụ onye dere ya afọ ojuju.
Nov 3, 2015 na 12:19 AM
M ka ga na-arụ ụka na ego bụ uru nke uru. Ndị na-eto eto na-arụ ọrụ na 6 / cents otu okwu ma ọ bụ darn dị ya nso na-ewu mmalite ma na-echekwa ọrụ ha. Enweghị m ego ọ bụla azụ mgbe m bụ nwata ọkachamara. Ka ị na-arụ ọrụ aka gị ma meziwanye, ị ga-abawanye uru. Ana m arụ ọrụ na akwụkwọ akụkọ ebe a na-emeso ndị na-emepụta ihe egwu nke ukwuu ma na-akwụ ụgwọ ụgwọ jọgburu onwe ya, mana ohere ahụ kụziiri ha ka ha mejupụta ihe okike ha, imepụta ihe, ma mụta nyiwe ha na-enwetabeghị n'ụlọ akwụkwọ. Nkà ndị ahụ mere ka ha nwekwuo asọmpi n'ebe ọrụ ma ha nwee ike ịchọta ọrụ dị egwu.
Naanị n'ihi na ị naghị akwụ ụgwọ taa apụtaghị na ị naghị ewulite uru, a ga-akwụ gị ụgwọ maka uru ahụ ma emechaa.